China KLT-10000 abavelisi kunye nababoneleli |Kuqaqambe ngakumbi
IMatel halide/Imasti yeHydraulic
Inqaba yokuqala yokukhanya emhlabeni enemasti yokusonga ye-hydraulic.I-KLT-10000 iye yaguqula imarike iminyaka emininzi, yaba yeyona modeli ibalaseleyo yokuthengisa ye tower yokukhanya ehambayo eTshayina.Enkosi kwi-4x1500W izibane ezinamandla zentsimbi ze-halide kunye ne-9.8 yeemitha zemast, i-KLT-10000 inokukhanyisa iindawo zokusebenza ezinkulu kakhulu.
I-KLT-10000 Light Tower
I-KLT-1000 yeyona modeli ithengiswa kakhulu yenqaba yokukhanya kwimarike yaseTshayina ngenxa ye-hydraulic mast ukusonga kunye neempawu ezikumgangatho ophezulu ezinikwe yiFuzhou Brighter Electromechanical Co, Ltd.
I-KLT-10000 ixhotyiswe ngesilawuli sedijithali esifundwe ngokukodwa ukulawula yonke imisebenzi yenqaba yokukhanya ukuze kube lula ukuyisebenzisa.
4x1500W izibane zentsimbi ze-halide ezinamandla ezikwazi ukukhanyisa iindawo zokusebenza eziphakathi nendawo ezinkulu.
Unokukhetha injini oyithandayo phakathi kweKubota kunye neYanmar.
Unyaka om-1 okanye iiyure zokusebenza ezili-1000 nokuba yeyiphi eza kuqala.
2.Ziziphi iimveliso ozisebenzayo?
IFuzhou Brighter Electromechanical Co.,Ltd.Ngomnye woMvelisi omkhulu weNqaba yoKhanya, enekomkhulu lakhe eliseShenzhen China.
3.Ithini imiqathango yakho yokuhlawula?
T / T 30% kwangaphambili kunye ne-T / T 70% ibhalansi ehlawulwe ngaphambi kokuthunyelwa / 100%LC.
4. Ngaba unomzi-mveliso wakho?
Sineminyaka engaphezu kwe-10 yamava kule ntsimi kwaye samkelekile kumzi-mveliso wethu kuhambo lokuhlola.
Ukubona okanye uku-odola i-KLT-10000, fowunela 86.0591.22071372 okanye undwendweleihlabathi eliqaqambileyo nge.
Izibane amandla 4×1500W
Le jenereyitha Lighting Tower
I-Diesel Lighting Tower
I-Diesel Power Lighting Tower
Inqaba yoMbane yokuKhanya ngeMast